Nyan! | December 2015
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Bonsu no Aba!
Afe biara, ɛdu July mu a, bonsu abereɛ bi a wɔfrɛ wɔn right whales (Eubalaena australis) ba Brazil kuro Santa Catarina mpoano. Wɔfi Antartic anafo tɔnn na ɛba bɛwo wɔ hɔ. Baabi a wɔba no mu nnɔ pii, enti ɛhɔ na wɔtete wɔn mma no kɔsi sɛ wɔbɛnyini. Ɛyɛ a nkurɔfo kɔ hɔ kɔgyinagyina po no ano ne abotan akɛse a ɛwowɔ hɔ no so hwɛ sɛnea mmoa yi ne wɔn mma di agorɔ wɔ nsuo no mu.1
Aboa Kɛseɛ a Ɔtumi Huri Danedane Ne Ho
Bonsu a yɛreka ne ho asɛm yi sõ paa; ne tenten te sɛ atikuleta. Sɛ wosusu a ɛbɛyɛ sɛ anammɔn 52 (mita 16). Ne mu duru bɛyɛ sɛ tɔn 80! Ɔyɛ tuntum, na ne ti sõ paa. Sɛ wokyɛ aboa yi mu nan a, ne ti nkoa ara yɛ baako. N’ano sõ, na ɛbae terɛ. Nkasɛɛ nni n’akyi te sɛ bonsu ahorow a aka no. Sɛ ɔnam nsuo mu a, ɔbu ne dua kɛseɛ no mu kɔ soro ba fam sen sɛ anka ɔbɛdanedane akɔ fã ne fã sɛnea mpataa pii yɛ no. Sɛ ɔpɛ sɛ ɔdane n’ani kyerɛ benkum anaa nifa a, ne nsa na ɛboa no. Ɛte sɛ wiemhyɛn a ɛredane ne ho.
Mmoa no kɛseɛ nyinaa akyi wɔtumi wɔn ho paa. Wohu sɛnea wɔhuri danedane wɔn ho na wɔgyaa wɔn ho to nsuo mu no a, w’ani bɛgye kwa. Wɔtumi dɔ asukɔ bere tenten ma ɛka wɔn dua nko ara wɔ nsuo ani. Wɔn dua nso, wɔtumi gyaa mu hwe nsuo ani ma ɛbɔ pete. Sɛ wɔhuri gyaa wɔn ho hwe po no mu a, wogyina akyiri koraa a wotumi hu.
Nea Ɛma Ɔda Nsow
Mmoa bi a wɔte sɛ sommorɔ nketenkete bi wɔ wɔn ti ho ne wɔn honam ani. Sommorɔ no we wɔn ma wɔn ti ho nyinaa sisi kyekye. Karina Groch a ɔda Brazilian Right Whale Project ano kaa sɛ: “Sɛnea ɛsono onipa biara nsaano nsensanee no, saa ara na ɛsono bonsu biara kyekye. Ɛno na nkurɔfo de hyɛ wɔn nsow. Sɛ mmoa no ba mpoano a, yɛtwa wɔn kyekye no foto de sie na sɛ wɔsan ba bio a yɛatumi ahu wɔn.”
Nyansahufo ka sɛ saa bonsu yi nni sẽ, enti sɛ ebi wu a, ɛyɛ den sɛ wobɛhu mfe a ɔdii. Wɔkyerɛ sɛ anyɛ yie koraa no, ɔbɛtumi adi bɛyɛ mfe 65.2
Ɔkwan a Ɔfa so Didi no Yɛ Nwonwa
Mmɔnkɔ nketenkete na wɔdi. Ɛwom sɛ wɔnni sẽ deɛ, nanso biribi wɔ wɔn anom te sɛ sapɔ. Enti wɔbue wɔn anom a, sapɔ no kye mmoa nketenkete no. Aduane a bonsu yi baako tumi di no dakoro nyɛ asɛm ketewa; ɛbɛyɛ sɛ tɔn mmienu.
Sɛ ɛdu ahuhuro bere (January/February) a, bonsu no kɔ Antarctic Po mu kɔdidi, na ɛma wɔdɔ sradeɛ. Sradeɛ no nti, sɛ wɔda nsuo a ɛyɛ nwunu mu a, awɔ nkum wɔn. Afei nso, ɛma wɔtumi twa kwantenten a wɔnnidi.
Ɛyɛɛ Dɛn Na Wɔnyaa Wɔn Din?
Efi bere tenten ni na nnipa a wɔwɔ Asase Anafo fam akum saa mmoa yi. Wɔkyerɛ sɛ saa bonsu yi na na nkurɔfo pɛ paa. Adɛn ntia? Efisɛ bonsu yi ho nyɛ hare, enti wɔpɛ wɔn a wɔmmrɛ. Wɔtumi tena kodoɔ mu koraa de pea wɔ wɔn. Afei nso, sɛ wɔkum wɔn a, sradeɛ dodoɔ a ɛwɔ wɔn mu nti wɔmmem. Wei ma ɛyɛ mmerɛ sɛ wɔbɛtwe wɔn aba mpoano.
Saa bere no, na ne sradeɛ ne adeɛ a ɛwɔ n’anom te sɛ sapɔ no wɔ boɔ paa. Ná wɔde ne sradeɛ sɔ kanea, wɔde gu afidie mu, anaa wɔde sra. Adeɛ a ɛte sɛ sapɔ no nso, na wɔde yɛ nneɛma pii. Ná wɔtumi de hyehyɛ mmaa ntadeɛ mu, na na wɔde hyehyɛ mpire ne kyiniɛ mu nso. Enti sɛ nkurɔfo kum bonsu yi na wɔnya sapɔ no bi a, na ɛtumi tua wɔn ho ka nyinaa.
Bɛyɛ mfe ɔha a atwam no, ahayɔ bebrebe ama mmoa no dodoɔ so ate. Enti nnansa yi, ɛho dwa aba fam koraa. Wɔguu baabi a na wɔdi saa bonsu yi ho dwa wɔ Brazil no afe 1973. Efi saa bere no, wɔagyae aboa yi ho dwadie koraa. Baabi wɔ hɔ a, nkurɔfo rebɔ mmɔden sɛ wɔbɛma mmoa yi ase adɔre. Nanso baabi wɔ hɔ a, wɔn ase rehye ara ne sa.
Bonsu yi ama yɛahu sɛ nneɛma a Onyankopɔn abɔ wɔ asase so dɔɔso na ɛyɛ nwonwa. Ɛma yɛhu Ɔbɔadeɛ Pumpuni, Yehowa Nyankopɔn nyansa ne ne tumi.—Dwom 148:7.
Baabi foforo a mmoa yi tumi wo ne Argentina, Australia, South Africa, Uruguay ne Auckland.
^ nky. 1 Nyansahufo kyerɛ sɛ bonsu yi gu ahorow mmiɛnsa. Nea yɛaka ho asɛm a yɛfrɛ no right whales (Eubalaena australis) no wɔ Asase Anafo fam. Ɛno akyi no, yɛsan wɔ Eubalaena glacialis ne Eubalaena japonica wɔ Asase Atifi fam.
Share Share Bonsu no Aba!
ASƐM A ƐDA SO Abusua mu Ntɔkwa—Dɛn na Ɛde Ba?
ASƐM A ƐDA SO Wobɛyɛ Dɛn Ama Abusua Mu Ntɔkwa Atwa?
ASƐM A ƐDA SO Nea Ɛbɛma Asomdwoe Atena Fie
MMOA A WƆDE MA ABUSUA NO Bere a Mo Adwene Nhyia
BIBLE NO ADWENE Ɔkra
WIASE NSƐM Nea ɛrekɔ so wɔ Europe
Afe 2015 Nyan! Mu Nsɛm a Yɛahyehyɛ
WƆBƆE ANAA? Nea Ɛma Ekuro Tumi Wu
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan NYAN! Ma Asomdwoe Ntena Wo Fie
Share Share NYAN! Ma Asomdwoe Ntena Wo Fie
Ma Asomdwoe Ntena Wo Fie
NYAN! Ma Asomdwoe Ntena Wo Fie